नगरवासीको प्रश्न – नगर एक किन निति अनेक ? – Daunne News
By Daunne News	 On कार्तिक ४, ०६:१५
रवि पाण्डेय बर्दघाट – पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पुर्वपश्चिम लोकमार्गको सडक फराकिलो पार्दै ८२ फुटको अवरोध हटाएर सफाई गर्दा जनस्तरबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पायो । धेरैले राम्रो काम भनेर प्रशँसासमेत गरे । एकाध बाहेक धेरैले राम्रो कामको शुरुवातले निरन्तरता पाओस भनि सञ्जालमा स्टाटस समेत लेखे । अलि अलि आलोचना पनि भयो । वास्तवमै भन्ने हो भने आलोचना गर्नेहरु भन्दा राम्रो भन्नेहरु धेरै भेटिए । ८२ फुटको अवरोध हटाउने यो कामबाट नगरपालिकाले तत्कालको साख पनि जोगायो । धेरैले नमुनाकै काम भने ।
तर एउटै नगरमा दुई निति र दुई ब्यवहार हुदाँ यो कार्यको जनस्तरबाट आलोचना शुरु भएको छ । वडा नम्बर ४ बाहेकका ८२ फुट भित्रका प्रतिक्षालय ज्यु का त्यु छन् । बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर ४ , ९ ,१० र ११ मा पुर्वपश्चिम हाईबे पर्दछ ।
वडा नम्बर ४ का बाहेक अरु वडाका प्रतिक्षालय÷ संरचना नभत्काएपछि यो आलोचना शुरु भएको हो । पहिले राम्रो काम भनेर सफाईको तामझाममा सरिक हुनेहरुले नै नगर एउटा निति किन दुई भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
८२ हटाउने कार्यमा किन बिभेद गरियो ? भन्ने आलोचनासंगै नगरका वडाहरुमा समेत किन एउटै निति किन लागु गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजी हुन थालेको छ ।
बर्दघाट ४ को त्रिवेणीचोक, बर्दघाट मुख्य बजार, शान्तिनगर दिब्यनगरका प्रतिक्षालय जोडतोड र तामझामले भत्काइए काम पनि राम्रै लागेको थियो – नाम नलेख्ने शर्तमा एक नगरवासीले भने – तर अरु वडामा हाइबेका तीनवटा वडाका ८२ भित्रका संरचना नहटाउदाँ बिभेदको महसुस भएको छ । ८२ भित्रका वडा नम्बर २ को चिसापानीचोक, क्याम्पस नजिकैको चन्द्रनगर, मौराहाचोक , धुब्रटोल, सुनटाँडी र भुताहाका प्रतिक्षालय नहटाइएपछि नगर एउटै दुई निति किन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको ती स्थानीयले बताए । एउटै नगरमा कहिं प्रतिक्षालय फोरियो – उनले थपे – कहिं फोरिएन । नगरभित्रका हाईबे जोडिएका सबै वडामा एउटै सडक निति हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
यसबारेमा हामीले बर्दघाट नगर कार्यपालिकाका प्रबक्ता रविन्द्र बिक्रम हमालसंग प्रतिक्रिया दिन आग्रह समेत ग¥यौ । एउटै नगरमा दुई निति किन ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले नगरमा वडा अनुसार फरक निति भएको स्विकार गर्नुभएको थियो । तत्कालिन आवश्यकता अनुसार बाटो सफाई गरिएको हो – नगरप्रबक्ता तथा आर्थिक सिवकास समिति संयोजक हमाल भन्नुहुन्छ – नगरसभाको बार्षिक निति तथा कार्यक्रममा ८२ सफाई कार्यक्रम छैन त्यसैले त्यस्तो हुन गएको हो । नगरसभाले पारित नगरेको कार्यक्रम रहेको हुनाले वडै पिच्छे फरक फरक निति लागु भएको उहाँको दावी थियो ।
संरचना हटाउने कार्य संगै समर्थन र बिरोधमा संजालमा यसरी चर्चा भएको थियो ।